Ngubani intombi kaJamie Foxx, uCorinne Foxx? - Ukuzonwabisa
Ukuhombisa Okunye Amanqaku Omfazi Ombane Ulwazi Kunye Nemfundo Abahlobo Nosapho Uxinzelelo Itekhnoloji Imikhwa Izixhobo Kufuneka Ubone
Ngubani intombi kaJamie Foxx, uCorinne Foxx? Nantsi yonke into esiyaziyo
Njengoko unokuba uqaphele, i-intanethi ibikhuza malunga nayo Utata Yeka Ukundenza Intloni! - uthotho olutsha lwehlaya oluthi lubonwe kwindawo yokuqala kuluhlu lweNetflix yemiboniso bhanyabhanya engaphantsi kweeyure ezingama-24. Iinkwenkwezi zikaJamie Foxx njengotata ohlekisayo ongatshatanga, uBrian Dixon, kodwa engaziwa ngabalandeli abaninzi, umboniso ngokwenyani ulawulwa yintombi kaJamie Foxx, uCorinne Foxx.
Okwangoku, ukusebenza ngasese kunye notata wakhe odumileyo yenye yeeprojekthi ezininzi umdlali weqonga oneminyaka engama-27 athe wabandakanyeka kuzo. Ke ngubani uCorinne Foxx? Ukusuka ekubekweni kweefilimu ezininzi ukuya kubamba ngokubamba ipodcast eyimpumelelo, nantsi yonke into esiyaziyo ngaye.
Iposi ekwabelwana ngalo nguCorinne Foxx (@corinnefoxx)
1. Ngubani uJamie Foxx'Intombi, uCorinne Foxx?
UCorinne Foxx (owazalwa nguCorinne Marie Bishop kuJamie Foxx kunye nentombi yakhe yangaphambili, uConnie Kline) ngumzekelo, umdlali weqonga, umbhali kunye nomvelisi. Emva kokufunda ubudlelwane boluntu kwiYunivesithi yase-Southern California, waya kwi-Howard Fine Acting Studio kunye ne-American Academy yoBugcisa boBugcisa. Ukusukela ngoko, ufumene iikhredithi ezimbalwa zokubambela kwaye, njengoko bekutshiwo ngaphambili, ebekhonza njengomvelisi olawulayo kumdlalo katata wakhe. Nangona kunjalo, kuvela ukuba ikhona Okuninzi ngakumbi kwiFoxx kunegama lakhe elidumileyo.
2. UCorinne Foxx ungumnini wemagazini ekwi-intanethi kunye neqonga lokuphila elibizwa ngokuba'FoxxTales'
Iqonga elikwi-Intanethi, elasungulwa ngo-2017, libonisa uninzi lwezithuba ezinengcaciso malunga nokuba sempilweni, ukonwaba kunye nendlela yokuphila, kubandakanya 'iVenkile eneVenkile yeNtombazana' egxininisa ukubaleka kwabasetyhini, amashishini obugcisa. Kwaye ngokwe iwebhusayithi esemthethweni , I-Foxx ijolise ekunxibelelaniseni abafundi 'nabantu, iindawo, amabali, kunye nomxholo okhuthaza kwaye uphembelele umphefumlo.'
Uyongeza, 'Ukusuka ekuboniseni abasetyhini abasakhasayo kubugcisa bokubhala kumava okuhamba kwihlabathi liphela, iFoxxtales yindawo yokuhlangana yeengqondo zokuyila kunye nemiphefumlo. I-Foxxtales ayililo ibali likaCorinne. Libali lomntu wonke. '
Isithuba ekwabelwana ngaso ngaba ndenza oku kulungileyo? I-Podcast (@isiphelo)
UCorinne Foxx kunye ne-BFF yakhe, uNatalie McMillan, okwangoku wabamba ipodcast eyonwabileyo ebizwa ngokuba Ngaba ndenza oku ngokuchanekileyo? . Kwi-podcast, omabini amanenekazi axoxa ukungaqiniseki kwabantu abadala ngokujongana nemibuzo eqhelekileyo, njengokuthi ugcwalise njani ukubuya kwakho kwirhafu yokuqala kunye nendlela yokufumana ukuthandana kwi-Intanethi-nangona bezijonga bekude neengcali kwezi zihloko.
Ngokwenkcazo esemthethweni, 'Injongo ayikokubonelela ngazo zonke iimpendulo, kodwa kukuzisa intuthuzelo kubaphulaphuli bethu besazi ukuba ayingabo bodwa ababuza imibuzo efanayo. Le podcast ihlala iluhlaza iya kusebenza njengencwadi yesikhokelo kubantu abancinci ngendlela yokuqalisa ibhola ebudaleni. Le ndlela 'yokufunda endleleni' yenza ukuba le podcast ingaphantsi kweTed Talk kunye neyure eyonwabileyo.
4. Wabonakala kuPharrell Williams's ividiyo yomculo yolonwabo
Ewe, ngokwenene. Ngokutsho kwakhe IMDb iphepha , UFoxx wenza ukubonakala njengomdanisi kwividiyo yomculo kaFarrell Williams ka'Wonwabile 'ngo-2013. Yena notata wakhe bazibandakanya nomzobi kwiqonga kwi-86th Academy Awards njengabadanisi abalondolozayo ngelixa edlala ingoma yomculo.
5. Iindima zakhe zokubambela zahluke kakhulu
Ukuza kuthi ga ngoku, uFoxx wenze iifilimu ezintathu, kwaye zonke zahlukile. Umzekelo, wadlala uSasha kwifilimu eyoyikisayo ka-2019, 47 yeemitha Ezantsi: Uncaged , emva koko wenza inkwenkwezi njengoKaycee Stone kwidrama yemidlalo yeDisney ye-2020, Ukhuseleko . Kwaye kamva kulo nyaka, umdlali weqonga omncinci usebenza kanye notata wakhe kumdlalo weqonga ozayo, Yonke-Iveki-yeNkwenkwezi .
6. UCorinne'Umsebenzi 'kuTata uyeke ukundenza iintloni' uphawula ukuqala kwakhe ukuvelisa
Ngelixa ndithetha no Forbes malunga notshintsho lwakhe ekuveliseni, uFoxx ucacisile ukuba ibisoyikeka ekuqaleni, kodwa wongeze ukuba 'ngamava amakhulu okufunda.'
Uye wathi, 'Ndingoyena mncinci kwaye yayingumlingisi wabasetyhini kuphela kumdlalo. Ndangena kula magumbi aneziphathamandla zeNetflix, nabantu ababenamava kwaye benemisebenzi emide. Ukungathethi ukuba akukho namnye kubo owayengathandeki kwaye emangalisa kum, kodwa ndandisazi ukuba ezi zihlangu ezinkulu ekufuneka ndizigcwalisile, kwaye kufuneka ndilinganise ngokukhawuleza okukhulu. Ekuqaleni, ndandisoyika kakhulu, kodwa ke ndakhumbula ukuba akukho mntu wazi izinto ezingcono kunam kuba oku kusekelwe kubomi bam. Ndicinga ukuba luthathe uxinzelelo kuba akukho mntu unokuthetha le nto ngaphezu kwam. '
7. Ngaba uCorinne Foxx uyasebenza kwimidiya yoluntu?
Ngokuqinisekileyo ukhona, kwaye naye Iakhawunti ye-Instagram uqhayisa malunga nabalandeli abangama-480,000. Isondlo sayo sibonisa inani ukuphosa okuhle , iiselfies ezimangalisayo kunye neepromos, ke ngokuqinisekileyo unokuqhubeka nokuhamba kwakhe ngokulandela iphepha lakhe lobuqu. Ukuba ufuna ukuhlala uhlaziywa kwi-podcast yakhe, unokulandela iphepha lakhe le-IG Ngaba ndiyayenza lento Kunene? .
Qhubeka nokukhula, Corinne!
Ezinxulumene: Le Jamie Foxx bonisa nje # 1 kwiNetflix emva kweMicimbi yeeYure
Izigaba Itekhnoloji Kwenziwa Kanjani Iiresiphi
Imiboniso bhanyabhanya yothando yesiNgesi ngo-2009
ii-asanas ezahlukeneyo ezinamagama
umtshato ebusuku ukuthandana egumbini
kufuneka ubukele ihollywood rom com iimuvi
ibra efanelekileyo yesifuba esicabalele
ulwaphulo-mthetho olumanyeneyo ubukumkani netflix